Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2770 - 2771 | XperimentalHamid
Funda Isahluko 2770 - 2771 yenoveli Indodana kaMillionaire eMthethweni by INkosi Leaf mahhala online.
UCharlie usize lo mama nendodakazi ukuba basukume, bese ebhekisa kumaRomans wathi, “Ngalesi sikhathi, Nksz He, uze e-Aurous Hill ukuzohlola izindaba zikaRuoli. Sicela wenze yonke imizamo ukuyigcina iyimfihlo ngokuphelele.
Kugcine kuyimfihlo kuwo wonke umuntu, kubandakanya nomndeni wakwa-He! ”
AmaRom ayazi ukuthi indlela ephephe kunazo zonke yokugcina imfihlo ukungatsheli muntu; ngaphandle kwalokho, uma kuvulwa indawo, kungaziwa ngabantu bangaphandle ngokuzayo, noma ngabe kuvulwa kangakanani.
URom uyazi ukuthi uma uRuoli eyindodakazi yakhe uqobo, akasoze akukhombisa umhlaba wangaphandle. Omunye umndeni wakwa-He, ngakolunye uhlangothi, kunzima ukuwuhlukanisa ngezigaba. Uyise, naye, kungenzeka angathembeki ngokuphelele.
Ngenxa yalokhu, ubambekile emile mayelana nokuphepha kwendodakazi yakhe.
Ngenxa yalokho, wagomela wathi: “Ungaqiniseka, Master, ngizokuvala umlomo wami ngalokhu. Ngeke ngitshele muntu uma sengiphumile kule ndawo! ”
“Mama uzohamba nini?” URuoli ubuze ngokushesha nje lapho ezwa lokhu.
“Ngitshele umkhulu wakho ukuthi ngizoya eJiaodong Peninsula kusasa ukuthola lapho ukhona, ngakho-ke ngizoya khona kusasa,” kusho uRom ngemuva kokucabanga isikhashana.
URuoli wayephatheke kabi, ephethe isidumbu samaRom esasiphethe isibhamu esisodwa ngokungathi intombazanyana ezandleni zakhe: “Mama… Awukwazi ukuhlala nami olunye usuku ngoba awusangiboni isikhathi eside?”
“URuoli, kunjalo, umama ufuna ukuhlala nawe, ungasho ukuthi hlala nawe usuku olulodwa, ngisho noma ngizoba nawe ngokuzayo, umama uyakwazi uku…” uRomani wabubula futhi washo ngokungathi sína.
URomma, ekhuluma ngalokhu, uthe engenakuzisiza: “Kepha… wonke umuntu emndenini wakwa-He uyazi ukuthi bengikufuna isikhathi eside.
Ngalesi sikhathi, ngiphinde ngatshela umkhulu wakho ukuthi noma ngabe uthini uMaste Wade kimi noma uthini uSo kimi, kufanele ngiye e-Jiaodong Peninsula kusasa ngiyokufuna.
Nginovalo lokuthi umkhulu wakho angangisola uma ngingalindela ngihlale e-Aurous Hill ngingahambi… ”
“Yize ngingenakungabaza ukuthi umkhulu wakho ubengeke akulimaze, umndeni wakwa-He unewebhu ebambekile yobudlelwano nokuhlukahluka okuningi kakhulu okungalawuleki.
Futhi, yize sehlukane nomndeni wakwaSu, bengilokhu ngikholelwa ukuthi basibuka ngasese.
Uma bazisa umndeni wakwaSu ukuthi usaphila, kungenzeka ukuthi baqhubeke nokukulandela. ”
Inkulumo kaRuoli yathukuthela lapho ezwa amaRom ayekhuluma ngomndeni wakwaSu, futhi washo ngomoya ophansi wathi: “Mama! Umndeni wethu u-He unikele iminyaka eminingi ebhizinisini lomndeni wakwaSu, kepha ekugcineni, umndeni wakwaSu awunantshisekelo kuphela ebudlelwaneni bethu bakudala, kepha futhi awunantshisekelo emndenini wami, waze wangithengisa nakuMbutho Wokuzivikela waseJapan. Ngizobuyisela le ntukuthelo esikhathini esizayo! ”
Roma “Emehlweni omndeni wakwaSu, singonogada abawukhokhele. Babeyizisebenzi zasekhaya labahlengikazi ezikhathini zasendulo. Babekholelwa ukuthi inqobo nje uma besinika imali, kufanele sijabule. Siphelelwe yithemba, futhi asiyifanele imizwa yabo, ngokombono wabo. ”
Ukhulume ehefuzela wathi: “Mayelana nokujezisa, uMama uncoma ukuthi ukuhlehlise okwamanje. Kunoma ikuphi, amandla omndeni wakwaSu awulinganiswa nomndeni wakwa-He.
Ngokuzayo, uzolalela i-Master. Hlala nje eceleni kukaMaster Wade esihlalweni, ungacabangi ngokuziphindiselela emndenini wakwaSu. ”
URuoli, amehlo akhe abomvu futhi aminyiwe, uthe: “Ngeke ngiyeke ukuphindisela. Iminyaka emithathu nanhlanu ngeke yanele; iminyaka emithathu noma emihlanu ngeke yanele; iminyaka eyishumi nesishiyagalombili iyokwanela.
Ngababambiqhaza abangamashumi amabili nje, akunakwenzeka. Kuzodlula iminyaka, ngisho namashumi eminyaka ngaphambi kokuba ngikhokhele umndeni wakwaSu ngakho konke lokhu! ”
URom: “Akunangqondo ngomama ukukuncenga ngokusekelwe enhliziyweni yakho, kodwa kufanele ulawule imizwa yakho.
Izinga lakho lokutshala lifinyelele eqophelweni elibucayi. Ungavumeli inzondo ithathe impilo yakho. Yeka ukuthi idemoni ngeke likwazi ukufeza umuntu ocabangayo! ”
URuoli unqekuzise ikhanda kancane.
Ngaleso sikhathi, uCharlie wathi: “Wena noRuoli anibonani isikhathi eside, Nkosazana He, ngakho-ke kufanele ubuyele ekamelweni lakho niphumule. Nginesiqiniseko sokuthi unezinto eziningi ongazisho komunye nomunye.
Ngizokudedela uhambe. Yidla isidlo sakusihlwa, futhi uma udinga olunye usizo olwengeziwe, sicela uxhumane nabasebenzi benkonzo. ”
“Ngiyabonga Mphathi!” Kusho uRom ngomnsalo omncane.
UCharlie uthe, emoyizela okuncane: “Kodwa-ke, Nksz He, uma unentshisekelo emndenini wakwa-He, kufanele sikhulume ngokusebenzisana okungenzeka kube khona.
Ngizokuqasha ukuthi uzosebenza nami ngaleso sikhathi, ngisuse isidingo sokuba nihlukane noRuoli. ”
URuoli ohlangothini uthe ngenjabulo: AmaRom akazange akhulume “Kuhle lokho! Ngemuva kwalokho uzoshintshela e-Aurous Hill, Mama! ”
Roma “Uma ungitshele nje ukuthi ngingatsheli muntu ngoRuoli, angikwazi ukuletha noma ngubani oqhamuka emndenini wakwaH, ngivumele asebenze ndawonye…
Kodwa-ke, uma ngikwazi ukuthwala noma yimaphi amalungu omndeni, ngingumuntu okhubazekile onekhono elibekelwe imingcele, futhi angiqiniseki ukuthi yini engingakwenzela yona ngaleso sikhathi… ”
“Nksz. Yena, ngiyakuqonda okushoyo, ”kusho uCharlie emamatheka kancane. "Kodwa-ke ngokubona kwami, lolu daba aluphikisani."
Ngemuva kokuma isikhashana, uCharlie wakhuluma wachaza: “Okokuqala, nginentshisekelo enkulu yokusebenza ngokubambisana nomndeni wakwa-He.
Lokhu kubambisana kugxile kimi, wena, nakuwo wonke umndeni wakwa-He, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngoRuoli ukuthi uyameseka noma cha.
Noma umndeni wakwaHe uthumela izinkulungwane zabantu e-Aurous Hill nawe ngokuzayo, ngeke babe nolwazi lokuthi ngubani uRuoli. ”
URom uthe ngokunqekuzisa ikhanda kancane: “Yize wonke umndeni wakwaHe usenze ukubambisana okujulile nawe, Master, kusenzima ukwazisa amanye amalungu omndeni ngesimo sikaRuoli ngaphandle kwami. Ngabe kulungile uma ngibheka ngale ndlela? ”
“Akunankinga,” kusho isikhulumi. Emomotheka, uCharlie uthe: “Umndeni wakwaHe manje usuhlukene nomndeni wakwaSu futhi udinga umthombo oqinile wokuthola imali, ngakho-ke ngicabanga ukukhulisa umkhakha wami wethonya.
Kungaleso sikhathi lapho abantu bedinga ukuqashwa khona, ngakho-ke ngithemba ukuthi uzimisele ukusebenza nami. Ngaphezu kwalokho, isinxephezelo engingamnika sona ngokungangabazeki yinto angeke akwazi ukuyenqaba. ”
URom wakhothama ngesizotha wathi: “Ubaba wami unquma ukuthi umndeni wakwaHe uzokulandela noma cha, ngakho-ke ngizothatha inkululeko yokukubuza ukuthi hlobo luni lwezimo okufanele unikeze umndeni wakwa-He.
Uma kukuvumela, uzongitshela ngqo, bese ngidlulisa umyalezo wakho kubaba, ozothatha isinqumo esingujuqu. ”
"Umndeni wakwaSu ukunike ziphi izimo phambilini?" Kubuza uCharlie, ahleke.
I-Roma “Njalo ngonyaka, umndeni wakwaSu uzokhokhela umndeni wakwa-He imali yenkontileka engaguquki. Isamba esiphelele singama-yuan ayizigidi ezingama-600, ahlukaniswa abe yizinkokhelo zenyanga ezingama-50 zama-yuan.
Ngaphezu kwalokho, kuzoba nomcimbi ekupheleni konyaka. Kukhona ukulinganisela okufanele kwenziwe. Uma umndeni wakwaHe wenza inani elidingekayo lemisebenzi phakathi nonyaka. Sizothola amanye amabhiliyoni amabili kuya kwamabili ngamabhonasi. ”
"Lokhu kuyefana nemali eyisisekelo kanye nemodeli yebhonasi yempumelelo yemisebenzi," kusho uCharlie kancane.
“Yebo,” kusho isikhulumi.
Roma: “Umndeni wakwa-He wawungenza konke okusemandleni awo ukuxhasa umndeni wakwaSu esikhathini esedlule ukuze wenze imali ethe xaxa.
Lokhu ikakhulukazi kungenxa yokuthi kunezizukulwane eziseduze zomndeni wakwa-He ezenza ubuciko bokulwa. Bangaphezu kwamashumi amahlanu abantu abahlala kulomndeni ka-He, nezinto zokwelapha ezahlukahlukene ezidingeka kubantu abaningi ukwenza i-akhawunti yezobuciko bempi ngaphezu kwengxenye yemali yabo engenayo.
Uma sihlukana nomndeni wakwaSu ngemuva kwengozi, bazokuyeka masinyane ukusikhokhela ngokheshi, kufaka phakathi inkokhelo yokugcina. Inkokhelo yanyanga zonke engu- $ 50 million ayibuyiswanga.
Ngalesi sikhathi, isimo sezezimali somndeni wakwaHe saba sibi kakhulu, futhi nentuthuko yawo wonke umuntu yaphazamiseka kakhulu. ”
Lapho uCharlie ezwa lokhu, waphakamisa izingalo zakhe wabuza, “Nks. Ake ngibuze, hlobo luni lwezinto zokwelapha oludingayo ukuze uzitshale? ”